नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धि त्रिविको अन्यत्नै जरुरी जानकारी ! सेयर गर्दै सम्पूर्णमा जानकारी गरौ – List Khabar
Home / समाचार / नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धि त्रिविको अन्यत्नै जरुरी जानकारी ! सेयर गर्दै सम्पूर्णमा जानकारी गरौ
नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धि त्रिविको अन्यत्नै जरुरी जानकारी ! सेयर गर्दै सम्पूर्णमा जानकारी गरौ
admin June 12, 2021 समाचार Leaveacomment 43 Views
काठमाडौँ । नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धि त्रिविको अन्यत्नै जरुरी जानकारी ! त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको नयाँ भर्ना अनलाइन माध्यमबाट खोल्ने भएको छ । भौतिक उपस्थितिमा मात्रै भर्ना प्रक्रिया कुर्दा धेरै समय पर्खनुपर्ने भएकाले अनलाइन माध्यमबाट भर्ना अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.शिवलाल भुसालले यसै साता स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्ना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन वैशाखबाटै गर्ने कार्यतालिका रहे पनि कोरोना (कोभिड–१९) प्रभावका कारण त्यो प्रभावित भएको थियो ।
यसका साथै स्नातक तहको कतिपय परीक्षाफल अझै प्रकाशित हुन बाँकी रहेका कारण पनि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । विश्वविद्यालयमा यो भर्ना खुलेपछि विद्यार्थीले व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन पाउनेछन् ।
अनलाइनबाट भर्ना प्रक्रिया खुला गरिए पनि जनजीवन सामान्य भएको अवस्थामा थोरै विद्यार्थी भएका विषयमा भौतिक उपस्थितिमै पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । सेयर गर्दै सम्पूर्णमा जानकारी गरौ
Previous पर्समा भूलेर पनि नराख्नुस् यस्ता चीन, नत्र छोड्छिन् लक्ष्मी माताले साथ
Next डेढ वर्षदेखि आगोमा जलिरहेको छ यो रुख, वैज्ञानिकहरु समेत चकित !